Ny fandravana ny fametrahana ny marika 'marina', Trump, Brexit (sy ny zavatra mifandray aminy) dia nanomboka: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 13 June 2019	• 12 Comments
Tao anatin'izay herinandro vitsy lasa izay dia nanatri-maso ny fandravàna voakilasy ny 'marina' marika mahazatra. Io marika io dia tsy maintsy asehon'ny paikady azo antoka amin'ny fiarovana: avy amin'i Donald Trump any Etazonia, Marine le Pen any Frantsa ka hatrany Thierry Baudet any Holandy. Io marika io dia natao mba hahazoana antoka fa ny fisainana mitsikera amin'ny alàlan'ny fampitam-baovao dia manjavozavo amin'ny fisainana fikomiana ary amin'ny zavatra izay ataon'ny olon-tsotra ihany no ataony. Avy eo dia voatery nifindra tany amin'ny zo faratampony sy ny nasionalista ary ny fasista na dia kely aza ny mpivaro-tena.
Mazava ho azy fa mbola filoham-pirenena ao Etazonia i Donald Trump ary mazava ho azy fa mbola mitohy ny fizotran'ny Brexit, saingy efa naminavina aho fa izy ireo dia ho fiandohan'ny fianjerana. Tsy maintsy hanomboka ny ady ara-barotra ny Trump mba hamoronana ny alibi lehibe ho an'ny fahalavoana ara-toekarena (ara-toekarena) Amerikana lehibe. Ny tsy fahombiazan'ny Brexit, na amin'ny tsy fisian'ny fifanarahana na eny (ny fomba vaovao indrindra) izany tsy mandoa ny volavolan-dalàna ho an'i Eoropa, dia tsy maintsy mitarika any amin'ny tsy fahampiana ara-toekarena ao amin'ny Vondrona Eoropeana. Tokony hampiseho amin'izao tontolo izao fa ny marika "marina" (sy noho izany ireo mpitsikera) dia ireo meloka noho ny tsy fahombiazan'ny loza.
Ny antony nahitantsika an'i Donald Trump nanohitra ny ben'ny tanànan'i Londres tamin'ny herinandro lasa teo ary ny antony nantsoany hoe vadin'i Printsy Harry Meghan Markle "mahatsiravina" dia ny antony nahitantsika azy manao fanehoan-kevitra tsy dia tsara loatra ary nifandraisany tamin'ny pôrnôgrafia mpilalao sarimihetsika. Izy dia tokony hahazo sary manjavozavo, mba hahatonga ny olona hahazo fahatsapana hafahafa ho an'ny elatra havanana. Izany tsokosoko izany dia mifandray amin'ny hetsika ankavanana havanana (ny marika 'havanana'). Izany rehetra izany dia heverin'ny dokambarotra (fampielezan-kevitra).
Azonao atao ny mampifandray izany vondrona izany amin'ny marika vaovao na efa ela. Efa mahita an'io marika taloha io izahay. Ity lahatsary eto ambany ity dia mampiseho ny fomba fifandraisana misy ity marika efa tranainy ity. Mivezivezy amin'ny alàlan'ny Facebook ny lahatsary ary mampiseho mazava ny anton'ny fikasana. Ny mpanohitra ara-politika sy ny haino aman-jery dia niantoka fa ny zo dia lasa marika ary ny hevitra rehetra dia rakotra hevitra tokana no napetraka. Tsy ny hevitrao intsony; Ny teboka dia hoe raha manana hevitra ianao, dia ho an'io marika io ianao. Ary ity marika ity ankehitriny dia ampifandraisina tsikelikely amin'ny marika 'Nazi'.
Fampielezan-kevitra mampihetsi-po izay maneho fa tena mahery ny fifandraisana amin'ny media, politika ary tambajotra sosialy. Ny fanamiana ao amin'ny lahatsary dia maneho ireo tsindry mazava fanamiana Mifamatotra amin'ireo hetsika havanana amin'ny havanana. Ny rohy ambany tsy mazava, izay mahatonga ity horonantsary ity, dia voalaza ao amin'ny 25e faharoa ao amin'ny lahatsary hoe:Angamba aho manana zo faratampony na inona koa?"(Tsindrio ny dikanteny).
Aza mivilivily amin'ny antoko politika iray na ankavia na ankavanana. Atsaharo ny fifidianana, aza mandray anjara amin'ny lalao politikan'ny fananganana marika. Hanjary hokarohina amin'ny vondron'olona tompon'andraikitra sy ny Nazis ianao amin'ny farany. Ny fisainana misimisy dia tsy maintsy aterina ho tandindomin-doza sy fiadanana.
89 Jarige Holocaust dia namoy ny ainy tamin'ny fanagadrana
Tags: fitarainana conspiracy, to drink, Featured, sarimihetsika, im, efa voavitrana, Marka, nazia, Nazia, nazikeule, Nazisma, marina, Reich, henatra, Video
13 June 2019 ao amin'ny 13: 03
Eny, mazava ho azy ... ny trompetra donald, marie le le penn ary ny farany indrindra dia ny fvd koa dia manakorontana ny silamo amin'ny lmfao. Heveriko fa ny vahaolana dia fifindra-monina bebe kokoa ... ary avy eo tsy mifidy ... maniry ady an-trano ao NL izy ireo fa noho izany dia tsy maintsy mamorona fihenam-bidy, manome tsiny ny zo ho an'ny toekarena, ny Miozolomana amin'ny fanatsarana sns sns ny politika ara-tsosialy sns.
Fomban-drazana mason-tsika miala amin'ny korontana .. Manana tenimiafina ihany koa aho ... ny korontana hiala amin'ny korontana ary miantoka fa tsy misy filaminana afaka hipoitra. Ilainy ny fifandimbiasan'ny antoko mpiaro mba hiasa ho toy ny fihoaram-pefy ho fandravana tanteraka, raha tsy misy izany korontana izany dia mety hisy korontana maharitra.
Aza mifidy ary ampiroborobo fotsiny ny fifindra-monina amin'ny ankapobeny ... lazao fotsiny ny olona fa mbola maro ny olona mbola azo tanterahana.
Ny minisitry ny serasera vaovao dia nilaza ihany koa fa mbola afaka mandray anjara amin'ny mpifindra monina 30 tapitrisa izy ireo. Raha tena maniry ny hamotika ilay hazakazaka fotsy izy ireo dia tsy hijanona amin'ny famantaranandro goavana izy ireo ary hampitandrina anao amin'ny fanambarana tahaka izany. Azonao atao ve ny mampiharihary ny tetinao?
Avelao hipoaka avokoa ny zava-drehetra .. dia ho potika avokoa ireo zavamaniry nokleary rehetra, i Israely, Etazonia ary ny sisa manerana izao tontolo izao koa .. Hiverina any amin'ny Stone Age ihany koa ny Isiraely ary hanana elatra ihany koa ny elit. Ataovy fotsiny ny lalao mankany amin'ny fahafatesana mba hijery raha sahy
13 June 2019 ao amin'ny 13: 38
Lahatsoratra lehibe, manaiky tanteraka! Raha ny zava-misy rehetra, tsy mety ho ny toe-javatra. Mijanona an-tongotra, vonona ny handoavana hetra, hamoaka ny feonao ary raha mahomby dia afaka mampihena ny fahaizanao misaina farafahakeliny. Ny toe-tsaina manakiana dia natao ho anao amin'ny alalan'ny tongotra izay nahavita tamim-pahombiazana ny programa fanokafana
13 June 2019 ao amin'ny 15: 52
Soraty eo amin'ny rindrina:
13 June 2019 ao amin'ny 16: 04
Tsara ihany koa ny lyriferian pyromaniacs dia nanintona toerana maromaro maromaro mba hanondroana ny rantsantanan'izy ireo taty aoriana. Tsy miresaka momba ireo trondro ananan'ireo dérivés izay nitombo avo dia avo tamin'ny vidiny ratsy hatramin'ny 2008 ary dia eo amin'ny banky banky samihafa, mieritreritra ny Deutsche Bank
15 June 2019 ao amin'ny 00: 03
Tsara ihany, araka ny voalazan'i Chris avy amin'ny FMI, misy antony fanampiny hafa (vakio ny lahatsoratry ny afo) .. ataovy eo an-tratranao ny havanao
17 June 2019 ao amin'ny 12: 37
mbola dingana iray mialoha ny ahy izy ireo aorian'ny fiverimberenan'ny tsy fahombiazana, ankehitriny banky ratsy iray amin'ny 50 miliara mba hametraka ireo trillions of derivatives ao aminy ... 😀 tsara ny lojika
18 June 2019 ao amin'ny 12: 54
Lasa mampihetsi-po lalina izany, fifanoheran-kevitra mafy izany taorian'ny tatitra momba ny hosanna volana vitsy lasa izay.
Eny Klaas (BIS) Tsy mandresy lahatra anao amin'ny hetsi-panoheranao aho, ny teny hoe EZB sy Draghi dia tsy tafiditra ao anatin'ny fiampangany, tsara ny tolakandro
18 June 2019 ao amin'ny 13: 55
nofoanana, nokapohina ary baomba, saingy nijanona ny Neanderthal. Ao amin'ny madurodam ihany no malala
18 June 2019 ao amin'ny 16: 33
hahaha fa i Klaas, fantatsika hoe iza iza no mifehy
11 Jolay 2019 ao amin'ny 13: 33
13 June 2019 ao amin'ny 16: 02
Tsara ihany ny zavatra soratanao!
Ireo olona izay afaka mieritreritra hoe iza no tompon'andraikitra amin'izany.
tsy andriamanitra na didy akory nanoratra hoe:
16 June 2019 ao amin'ny 16: 46
Martin Vrijland indray dia nanenjika ny lohan-tsininy. Ny fiheverako fa nanaiky tanteraka nandritra ny taona maro aho ary tsy azoko atao amin'ny teny tsara kokoa.
Hatramin'ny nandefasan'ny olona, ​​dia nisy fiantraikany be teo amin'ny vatam-pianakaviantsika. Avelao ihany fa ny olona manadala dia afaka / manana vatosoa mihitsy ...
Ny zavatra hafa rehetra dia miresaka momba izany matetika.
Ny Great Game dia lasa mazava kokoa amin'ireo izay sahy hita maso:
Ny famongorana ny famonoana ny fanjakana dia amin'ny alalan'ny ady an-trano (vakio: ny fanaraha-maso ny mponina), nirotsaka (vakio: orchestrated) noho ny tsy fitandremana ny Islamista tsy fantatra, mitarika ho amin'ny famotehana ara-toekarena goavana izay nomena tsiny amin'ny "marina" (inona amin'ny anarana?) AHRIMAN (vakio: Rudolph STEINER), ny REDEEMER (izany hoe, catalisme / judeo-christianisme / fivavahana iray eran-tany) dia mitondra ny lazaina hoe famonjena, izay hanjary ho tsinontsinona fa ny fanandevozan'ny ondry.
Ity tantara manontolo ity dia efa niasa tamina zato taona vitsivitsy. Sarin'ny teatra iray, raha manontany ahy ianao ...
« Azonao atao ny mitondra fiovana ary zava-dehibe ny safidinao!
Nanazava ilay olana lehibe, fanehoan-kevitra, vahaolana »
Total fitsidihana: 4.294.029